प्रमज्यू ! निर्णय फेर्नुभन्दा नबोल्नु नै उत्तम होला कि ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
प्रमज्यू ! निर्णय फेर्नुभन्दा नबोल्नु नै उत्तम होला कि ?
२०७४ चैत्र ९, शुक्रबार ०९:४६ गते
संविधानले संघमा बढीमा पच्चीस जनासम्म सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद् रहने भनी किटान गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले वामघटकबाटै २२ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समेट्ने भनिरहँदा उनले यति जम्बो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि उनको यस कदमको आलोचना भइरहेको छ । साथसाथै उनको यस कदमबाट संशय पैदा भएको पनि छ । उनीहरुलाई समेट्न आप्mना नेता तथा कार्यकर्तामाथि उचित अंकुश लगाउनुको सट्टा संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयत्न भए अझै उनी आलोचित मात्र होइन विवादमा समेत पर्नेछन् । सामान्यतया केन्द्रीय सरकारका अर्थ, गृह, सामान्य आदि मन्त्रालयका केही कार्यहरु भए पनि अन्य मन्त्रालयले गर्ने काम प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले गर्ने भएकाले उनीहरुको खासै भूमिका हुँदैन ।
प्रदेश र स्थानीय तहले भएभरका काम गर्ने भएपछि केन्द्रीय मन्त्रीहरुले गर्ने काम भनेकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यहरुमाथि सिंहावलोकन गर्ने मात्र हो । त्यसका निम्ति सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने भनेर स्वयं ओली र प्रचण्डका बीच सहमति भए पनि दिन घड्कदै जा“दा बोली फेरिँदै पनि गएको छ । यसरी बोली फेरिँदै जाने हो भने ओली सरकारमाथि जनताको विश्वास टुट्ने छ ।
साँच्चै भन्दा कामलाई चुस्त र प्रभावकारी राख्नभन्दा सबैलाई भाग पु¥याउनेतिर लाग्दा समस्या पैदा हुँदै गएको छ । एमालेकै नौ महिने शासन कालमा थोरै मन्त्रीहरु थिए । सबै काम पारदर्शी र प्रभावकारी पनि थिए । त्यसैले छोटो समयमा पनि विकास निर्माणका धेरै कार्य भए । जनताका कामहरु फटाफट भए । जनताका हितमा भए । त्यसैले पनि त्यो काल नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णिम काल मान्ने गरिएको छ । त्यसै इतिहासको आधारशीलामा उभिएर एमालेले पटकपटक विजय हासिल गर्दै आएको छ । यस तथ्यतर्फ ओली सरकारले अहिले दृष्टि नपु¥याएको अनुभूति हुँदै छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र जे चाह्यो र अडान राख्यो त्यो अक्षरशः लागू हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा पनि उनले जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने कार्य त्यति उत्साहवद्र्धक देखिन्न । उनले समृद्धितर्फमात्र होइन संविधानका मर्म र अक्षरहरुलाई पनि पूर्णतः लागू गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ । शक्तिशाली भएसँगै संविधानका मर्म, भावना र अक्षरलाई अनदेखी गर्ने धृष्टता उनका निम्ति अब शोभा दिँदैन । उनी भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, डन र चाटुकारहरुमाथि कडा र त्रूmर तथा सज्जन र सरलहरुका निम्ति भने उत्तिकै नरम बन्नुपर्छ । सहनशील र नम्र अनि भद्र पनि देखिनु अपेक्षित छ । राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीले राष्ट्रलाई नै केन्द्र बनाएरै अघि बढेनन् भने उनको राष्ट्रवाद सत्ता चढ्ने भ¥याङमात्र भएको प्रमाणित हुने छ । यसर्थ, उनले ससाना विषयहरुलाई पनि उत्तिकै मसिनो ढङ्गले बुभ्mनु र गर्नु आवश्यक पनि छ ।
अहिले भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै जा“दा जेट विमानमै नअट्ने भइसके । अघिल्लो सरकारको जत्तिको बनाउन्नौ“ भने पनि प्रदेशतिर बनेको मन्त्रिमण्डलमाथि दृष्टिगोचर गर्दै संघतिरको मन्त्रिमण्डललाई हेर्दा यो संख्या अत्यधिक हो । त्यसमा महिला मन्त्रीहरुले मह¤वपूर्ण मन्त्रालय पनि पाएका छैनन् र संख्या पनि न्यून छ । पार्टीमा मौलाएको अतिशय मह¤वाकाङ्क्षा र अनुशासनहीनतातर्फ नजर लगाउने हो भने संघमै मात्र १०१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए पनि नेतागणको व्यवस्थापन हुन सक्दैन । नेतागणको व्यवस्थापन गर्नकै लागि यस्तो विस्तारले देशको हित त गर्दैन नै, स्वयं मन्त्रिगण र मन्त्रिपरिषद्को ओज र गरिमालाई धूलिसात गर्ने निश्चित छ । यसमा ओली सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । प्रदेश र संघमा समेत गरी सयौँ संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन भइसकेको परिस्थितिमा अझै पनि भाग पु¥याउनकै निम्ति विस्तार गर्नु नहुने जनचाहनालाई उनले बुभ्mनुपर्छ ।
नेपालका सन्दर्भमा संघीय पद्धति पहिलो हो । तर, अहिले प्रादेशिक सरकार बनिसकेको सन्दर्भ छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पुरानै ढाँचाको केन्द्रीय शासन प्रणालीमै अभ्यस्त रहँदै आएको छ । संघीय सरकारले निर्देश गर्दा कुन तहलाई कुन पद्धतिअनुरुप निर्देशन दिने भन्नेमा सबै अभ्यस्त बनिसकेको परिस्थिति छैन । एउटाको कार्यक्षेत्रमा अर्कोको हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने भय पनि छ । सानो पावरले नै तमाम कार्य सम्पन्न हुने अवस्थामा ठूलो पावरको उपयोग हुनु जायज हुँदैन भने अर्कातिर अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको अनुभूति गरिन सक्तछ । कैलालीको बोक्सी काण्डमा प्रताडित बनेकी राधाको उपचार पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने विषयमा प्रादेशिक सरकारको क्षेत्र रहेको र उसैले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कार्यमा समेत केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको भनी कुनै वृत्तबाट आवाज मुखरित भएको छ । यस आवाजलाई अन्यथा मान्न पनि सकिन्न । सम्भवतः यस विषयमा देशव्यापी रुपमा कुरा उठेको हुनाले तत्काल एक्सनमा जानु अपेक्षित भएकाले पनि तत्काल केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको पनि हुनसक्तछ र संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने परिस्थिति सृजना हुने तथ्यलाई आँकलन गरेर पनि हुनसक्तछ । यद्यपि, सात ओटा प्रदेशहरुमध्ये ६ ओटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको प्रादेशिक सरकार रहेकाले केन्द्रले निर्देश र हस्तक्षेप गरे पनि कानुनसम्मत नभए पनि आपत्ति नहुन सक्तछ । तर, सधैँ एकै स्थिति नहुन सक्तछ । यसर्थ, निर्देशन दिने विषयमा समेत गहन सोचविचार गर्नु अपेक्षित छ ।
पाँच वर्षसम्म चल्ने स्थिर सरकार भएकाले सरकारमा जान सबैको चाहना हुनुलाई अस्वाभाविक नै मान्न सकिन्न । तर, यसमा नेतृत्वले विचार पु¥याउनुपर्छ । सबै नेतागण चाहे ती पुराना हुन्, चाहे नयाँ सांसद्, सबैमा उत्तिकै दक्षता, योग्यता र अनुभव पनि छ । यसैले सबैलाई चक्रीय रुपमा स्थान दिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति पटकपटक दोहोरिने कसैले कहिल्यै अवसर नै नपाउने पद्धति उत्तम होइन । गुट र उपगुट चलाउन छूट दिने अनि अनुशासन पालना गरिएन भनेर गुनासो गर्नुको पनि कुनै तुक देखिन्न । नेतृत्वले नै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेपछि पार्टी पद्धति सुचारू हुने कल्पना गर्न सकिने कुरै भएन ।
हुन त, महाधिवेशनताका अनेकौँ गुट थिए । त्यसमध्येको ठूलो गुट बनाउन सफल ओली अध्यक्ष भएपछि पार्टी पद्धतिविरूद्ध बोल्ने र कार्य गर्ने प्रवृत्ति करिब अन्त्य भएको छ । यदाकदा कसैले पार्टी नेतृत्वविरूद्ध बोले भोलिपल्टै सच्चिन बाध्य पारेका छन् । त्यसपछि स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान दिएका छैनन् । विभिन्न गुट÷उपगुटमा विभक्त पार्टीलाई एकढिक्का पारेर लैजान सक्षम ओली आप्mना पक्षकालाई काखा र अन्य पक्षकालाई पाखा पार्ने गर्दछन् । प्रादेशिक सरकार निर्माणमा पनि उनले यसै गरे । अष्टलक्ष्मी शाक्यले आक्रोश व्यक्त गरिन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नै पुनः राष्ट्रपति दिने विषयमा पनि उनले त्यसै गरे । राज्यलाई थप खर्चबर्च बढ्ने कुरा उठाइयो । तर, मन्त्रालय थप्दा बढ्ने लागत कैयौँ गुणा हुने भए पनि त्यसतिर भने आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति उनमा देखियो । यस्ता प्रवृत्ति भुसको आगोझैँ भनौँ या भित्रभित्रै सिरकमा लागेको आगोजस्तै हुन्छ । कथंचित थोरै हावा लाग्नासाथ खरमा लागेको आगोझैँ हुन्छ, जसलाई भोलि उनले सम्हालेर सक्ने स्थिति बन्दैन । यसर्थ पनि ओलीले राजनीतिक वा प्रशासनिक जुनसुकै किसिमको कदम अगाडि बढाउँदा पनि गम्भीरता अवलम्बन गर्नु नै बुद्धिमानी हुनसक्तछ । अझ प्रतिपक्षीसँग त झन् उनको व्यवहार सदा अभिन्न मित्रवत् हुनु अपेक्षित छ । हरेक विकास निर्माणका कार्यमा उनीहरुलाई विश्वासमा लिन सके प्रगतिले मूर्तरुप ग्रहण गर्न बेर लाग्नेछैन ।
यसर्थ, जसरी उनले संघीय समाजवादी फोरमलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न जारी राखेका छन्, जसरी राजपालाई आप्mनो पक्षमा ल्याउने कूटनीतिक प्रयत्न जारी राखेका छन्, त्यसरी नै हरेक विकास र नीति निर्माणमा प्रतिपक्षीलाई पनि जोड्दै अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनसक्तछ ।